Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Shan xeebood oo aysan seegin inta ay fasax ku joogaan Seychelles
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Waxay caan ku tahay quruxdeeda dabiiciga ah iyo dhirta iyo duunyada cajiibka ah, xeebaha ku dheggan buluugga buluugga ah iyo biyaha diirran ee Seychelles ayaa isku soo jiidaya. Laga soo bilaabo bilaa-jilicsan budo-jilicsan ilaa fiditaanno dhaadheer oo calaacal ah iyo xargo-fuulan, jasiirad kasta waxay haysaa qarsoodi “anse.”
Seychelles waa jasiirad ku taal Badweynta Hindiya oo leh in ka badan 100 jasiiradood oo qurux badan magaceeda.
Waxaa jira in ka badan 120 xeebood oo cajiib ah oo lagu raaxeysto inta la booqanayo qarankan jannada ee ay ka buuxaan farxadaha baddu.
Halkan waxaa ah 5 xeebood ee ugu sarreeya oo ay tahay inay ku jiraan liistada booqashada dalxiis kasta markay tahay Seychelles.
Iyada oo in ka badan 120 xeebood laga dooran karo kaliya saddexda jasiiradood ee ugu waaweyn Seychelles, halkan waxaa ah shan xeebood oo gabi ahaanba ku jira liistada joogsi kasta ee booqde.
Meel qarsoodi ah oo qarsoodi ah, oo ku taal La Digue, Anse Cocos waxay ku taal xeebta bari ee jasiiradda yar ee Seychelles waxaana kaliya oo lagu tagi karaa 30 daqiiqo oo socod ah, ama waddo laga soo qaado Grand Anse ama jihada kale Anse Fourmis. In yar oo si fiican looga yaqaan Anse Source D'Argent oo aad loo sawiro, oo ay la wadaagto astaamo isku mid ah, Anse Cocos oo qurux badan ayaa aad loogu qiimeeyay dhinacyadeeda qarsoon, taas oo ka dhigaysa dhammaan soo jiidashadeeda.
Waxaa loo yaqaanaa xeebta ugu caansan Praslin, Anse Lazio waxay inta badan ku jirtaa tobanka xeebood ee ugu sarreeya adduunka. Waardiyayaashii dahabka ahaa ee waayeelka ahaa waxay waardiye ka taagan yihiin labada daraf ee fidinta sawir-qumman ee ciid cad oo jilicsan oo u horseedaya biyo saafi ah, oo ku habboon dabaasha iyo dabacsashada. Waa waajib liis kasta oo soo -booqde ah, Anse Lazio ayaa weli ah mid la isku raacsan yahay oo ma niyad jabin doonto.
Mid kale oo la jecel yahay oo ku yaal Praslin, Anse Georgette oo aad u fiican ayaa u qalantaa socod 30-daqiiqo ah iyada oo loo marayo dhulka raaxada leh ee Constance Lemuria Resort. Haddii kale, waxaa lagu heli karaa doon. Haddii aad gaarto Anse Georgette, waxaa hubaal ah inaad ku guuleysan doontid ciid jilicsan oo boodh ah oo ay ku xardhan yihiin ubaxleyda kuleylaha leh, iyo sidoo kale meel aad u qurux badan oo qiiqa.
Waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xeebta ugu sawirrada badan adduunka, oo lagu gaari karo baaskiil wadista La Digue's L'Union Estate, astaantaas gaarka ah waxaa lagu qiimeeyaa dhagaxa weyn ee dhagaxa ah laakiin sidoo kale ciiddeeda jilicsan ee jilicsan iyo biyaha turquoise cad. Iyada oo ay gabaad ka dhigtay xeebta, baddu si aan kala go 'lahayn ayay u deggan tahay Anse Source D'Argent, taas oo ka dhigaysa mid ay jecel yihiin qoysaska iyo lammaaneyaasha doonaya in ay hirarku ruxaan ama ay isku dayaan in ay dhuuqaan. Waa waajib, haddii aad ku jirto La Digue!
Badanaa waxaa lagu tilmaamaa “neefsasho” ama xitaa “aad u fiican,” Anse Takamaka waa mid ka mid ah xeebaha Mahé ee ugu cajiibka badan. Waxay ku taallaa koonfurta Mahé, Anse Takamaka waxay astaan ​​u tahay xeebta kaarka kaamilka ah, halkaas oo biyaha duurjoogta ee Badweynta Hindiya ay yimaadaan xeebta.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan Seychelles
Isgoysku wuxuu si ku meel gaar ah u bilaabayaa Meel firfircoon ...
Lotte Hotels & Resorts Magacyada Maamulaha cusub ee Ameerika